Tian'i Microsoft hiverina any amin'ny smartphone ny jack Jack 3,5 mm Vaovao momba ny gadget
Na dia marina aza fa tsy Apple no orinasa voalohany nisafidy ny hanafoana ny fifandraisana an-telefaona avy amin'ny finday avo lenta finday, izy no orinasa lehibe voalohany nisafidy ny hanafoana azy. Mihabetsaka ny mpanamboatra no misafidy ny tsy misy an'ity jack ity, jack izay nanakana ny smartphone tsy ho mahia ankoatry ny fibodoana ampahany tena manan-danja ao anatin'ny fitaovana.
Ny teknolojia hitantsika ao anaty finday avo lenta androany dia manome antsika singa marobe izay mampiasa lavaka ao amin'ilay fitaovana ary ilay jack nandritra ireo taona faramparany dia nanjary olana teo amin'ny habakabaka. Microsoft dia nametraka patanty miaraka amin'ireo mampiseho amintsika fa na eo aza ny fironan'ny mpanamboatra, azo atao ny manohy mampiditra ny jack.
Ny patanty Microsoft dia mampiseho antsika jack izay manitatra ny habeny noho ny membrane malefaka izay afeniny, fonosana manitatra ny habeny rehefa ampidirintsika ny plug. Ny hevitr'ity membrane ity raha apetraho eo amin'ny sisin'ny terminal na eo an-damosina na eo aloha, mamorona karazana hump satria ny fakan-tsary dia manolotra telefaona marobe.
Ny mazava dia hoe raha nanangana an'io hevitra io i Microsoft taloha, dia azo inoana fa nisy mpanamboatra hafa nandray izany, na tsia. Fa amin'ny teknolojia sy fanentanana izay nampanaovin'ilay orinasa ireo mpampiasa, ny ho avy dia headphones bluetooth tsy misy tariby na, raha tsy mahomby, headphone tariby, raha mila kalitao ambonimbony kokoa isika, miaraka amin'ny fifandraisana USB-C na tselatra raha miresaka momba ny fitaovana Apple isika.
Eny an-tsena isika izao dia efa afaka mahita mpanamboatra samihafa izay manome vahaolana antsika amin'ny lafiny roa, na dia eo aza ny zava-misy fa ireo mpanamboatra nisafidy ny hanafoana ny fifandraisana jack, mitohy manolotra adaptatera hanohy hampiasa headphones nentim-paharazana miaraka amin'ny fifandraisana jack.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Tian'i Microsoft hiverina any amin'ny smartphone ny jack 3,5mm